Ndinoshuva dai Apple Watch iine zvinhu izvi zveOppo Watch | Ndinobva mac
Mazuva mashoma akapfuura Oppo Watch yakaunzwa panzvimbo yacho. Iyo smartwatch yekambani ino yakafanana, ngatiti, zvinopfuura zvine musoro neApple Watch. Nekudaro, mukati ivo vakasiyana kwazvo. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kushamisa zveshuwa nekambani yeAmerican wachi ndeyekufananidza kwakaringana pakati peanoshanda masystem. Kunyange zvakadaro, Oppo ane akateedzana eanoshanda ayo anogona kunyatso kuverengerwa muApple wachi.
1 Shanu Oppo Watch inoshanda iyo iyo Apple Watch inofanira kuve kana kuisa
1.1 Chidzitiro Chikuru:
1.3 Nebhetri yakawanda
1.4 Kurara tarisa
1.5 Nemaitiro mazhinji
Shanu Oppo Watch inoshanda iyo iyo Apple Watch inofanira kuve kana kuisa
Kana mudziyo unoratidzika kunge wakaita sewe Apple unoratidzwa, vanhu vazhinji vanoisa maoko avo kumusoro kwavo uye vanofunga kuti ikopi yakajeka. Zvisinei, tinofanira kugara tichifunga zvakanaka. Kuti mamwe mafemu aratidze michina yakafanana inogona kupa huwandu hweanoshanda ayo Apple anogona kusanganisira.
Izvi ndizvo zvinoitika neOppo Watch. Wachi kubva kukambani yeChinese iyo inoratidzika kunge yakafanana neiyo Apple wachi, asi izvo inosanganisira zvishanu mashandiro ayo Apple Watch inogona kusanganisa uye kuti zvirokwazvo iwe semushandisi, ungade kuti iverengerwe. Ngatione zvavari:
Parizvino makuru eApple Watch anoyera 44 mm zvinova zviri muindasitiri yekutarisa inogona kutorwa senge hombe kesi. Asi ngatirangarirei kuti iwachi iyo inopa yakawanda, yakawanda ruzivo, uye kuti yakakura skrini inogara ichiuya inobatsira. Oppo ane 48,5mm kesi musiyano mukuru.
Wachi hombe inowanzo shungurudzwa nekuremerwa, asi izvo hazvisizvo neOppo Watch. Iyo yakatetepa kupfuura Apple Watch, ichiita kuti igare zvakanaka. Iyo wachi yeAmerica ndeye 10,7 mm gobvu, nepo Chinese wachi ingori 4,5 chete; Asingasviki hafu uye izvo zvakare zvakawanda.
Iyo Apple Watch yakavandudza zvakanyanya neshanduro nyowani, maererano nebhatiri. Ini ndinorangarira akateedzana 1 apo, kwandiri, ini ndakapotsa ndasvika husiku nebhatiri rakaringana. Iye zvino vhezheni yechishanu ndakakwanisa kupedza mazuva maviri chete (zviri pamutemo inopa maawa gumi nematanhatu anoteedzana), hongu, nguva dzose neichi skrini. Asi ndizvo zvazviri Oppo Watch inotora makumi mana maawa emahofisiNdokureva, kuti nekushandisa kumwe chete kwaizondigarira angangoita mazuva mashanu akateedzana. Rangarira, yakatetepa uye ine skrini hombe.
Chimwe chezvinhu izvo Apple Watch isingakwanise kupa zvakawandisa, iri mu kuongorora kurara. Ehe, ndezvekuti iwe haugone kusvika uine nhumbi pakupera kwezuva repiri. Asi nebhateri uye kutetepa kweOppo Watch, zviri nyore kuona edu ekurara mapatani. Nenzira, ndizvo chishandiso chakatobatanidzwa mukati meiyo wachi pachayo, saka haudi rwechitatu-bato kunyorera seApple Watch.
Iwo ma skrini eApple Watch anga achiwedzerawo sezvo huwandu hwayo akateedzana hwakawedzera. Iine zvimwe zvepakutanga saMickey Mouse, avo vanobva kuToy Story. Ine zvimwe zvakakura senge izvo zve Nguva-Kupera kana iyo yesimbi yemvura kana moto. Zvino, une chero chinowirirana nehembe yako?
Oppo Watch ine njere yekunyepedzera iyo Iyo inokwanisa kugadzirisa iyo sphere nekuisanganisa iyo neruvara rwehembe yawakapfeka panguva iyoyo. Chinhu chinotonhorera chinoita kuti maChinese atarise zvishoma kupfuura Apple Watch.
Haisi iyo hunhu hwaunofanirwa kushandura wachi, asi zvirokwazvo inokwezva kutarisisa kwakawanda. Isu tinopinda mumunda wekukurukurirana nezve maitiro eiyo mawachi skrini uye zvisina kunangana, angangoitawo eiyo iPhone kana iyo iPad Kana iwe uchida Android kugadzirisa, kune zvese zvimwe Apple.
WachiChinese wachi, haizozoburitswa zviri pamutemo kusvika Kurume 24 munyika yeAsia nemutengo wakaderera zvikuru kupfuura Apple Watch. Tiri kutaura nezve $ 216. Isu tinoziva kuti haina kuenderana neApple Watch, asi isu tinogona zvakare kuti, ini zvirinani, kuti hupenyu hwebhatiri hunoshamisa. Nenzira, inokwanisa kupedza mazuva makumi maviri nemaviri mune yakaderera simba modhi.
Tichave takateerera kune dzimwe nhau pamusoro peiyi wachi uye tinotarisira kuti zvizvarwa zvitsva zveApple Watch zvinogona kusanganisira mamwe mashandiro ataurwa pamusoro, sekutarisa kurara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ndinoshuva dai Apple Watch iine aya maOppo Watch maficha
Ini handifunge kuti "hombe skrini, yakatetepa uye yakawedzera bhatiri" inogona kutorwa se "mashandiro", uye "neakawanda maitiro" inondiuraya ...
Tenderera kubva kuMac yako kuenda kune chero skrini neJustStream Pro